Nepal Dayari | अब मेरी छोरि कहिल्यै फर्केर आउदिन मलाई ब’चाऊ ! रुँ’दै फोन गरेकी थिई, पापीले कु’नामा लगेर स’किदियो।
अब मेरी छोरि कहिल्यै फर्केर आउदिन मलाई ब’चाऊ ! रुँ’दै फोन गरेकी थिई, पापीले कु’नामा लगेर स’किदियो।
असार २७, २०७८ आइतबार २२२ पटक हेरिएको
चिवतनको एक सामुदायिक वनमा फे’ला परेको सुजिता भण्डारीको श’वको पो’स्ट’मार्टम रिपोर्टबाट उनले वि”ष सेवन नगरेको खुलेको छ । त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा गरिएको रिपोर्ट अनुसार उनको मृ”त्यु वि’षादी सेवनका कारण नभएको खुलेको हो । उनको श”व भेटिएको स्थानमा वि”षादीको बोतल भेटिएको थियो । त्यसपश्चात यही से’वनका कारण उनको मृ’त्यु भएको हो की भन्ने आ’शकां गरिएको थियो ।
राप्ती नगरपालिका–३ की ४५ वर्षीया अम्बिका भण्डारीका आँखा ११ दिनदेखि ओ’भा’नो भएका छैनन्। रुँदा–रुँदा आँखा राता भएका छन्। छिनमै भ’क्का’नि’न्छिन्, छिनमै चुप लाग्छिन्। शरीर क’मजोर भएर टा’उकोमा फे’टा बाँ’धेकी छिन् । आफूलाई स’म्हाल्नै सकेकी छैनन्। आफन्त र छिमेकी आउँछन्, सान्त्वना दिन्छन,उनीहरू आँखाभरि आँ’सु ब’नाउँछन्।
अम्बिकाले हराएकी छोरीको पि’रलो भए पनि फे’ला पर्लिन् भनेर चित्त बुझाउँदै बसेकी थिइन्। तर, २३ वर्षीया छोरी सुजिता आइतबार मृ’त फे’ला परेको खबर पाएपछि उनी आफूलाई स”म्हाल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेकी छन् । छोरी सम्झिँदै छा’ती पि’ट्दै रु’न्छिन्। मलाई ब’चाऊ ! मलाई ब’चाऊ ! भनेर छोरीले रुँ’दै फोन गरेकी थिई। हामीले ब’चाउन सकेनौं,उनले रुँ’दै भनिन्, अ’पराधीले त्यस्तो कु’नामा लगेर स’किदियो।
रिपोर्ट अनुसार मृ’त्युको कारण खुल्न’ सकेको छैन । प्रा’रम्भिक रिपोर्टअनुसार भण्डारीको ह”त्या वा आ”त्मह”त्या प्र’मा’णित गर्ने कुनै आधार फेला नपरेको पो’स्टमा’र्टममा सं’ल’ग्न त्रिवि शिक्षण अस्पतालका डाक्टर गोपाल चौधरीले बताए। ‘श’व चि”र”फा”र गरेर हेर्दा बाहिरी-भित्री कुनै चो”टपटक छैन,’ डा. चौधरीले मंगलबार सेतोपाटीसँग भने, ‘चो”टपटक नदेखिएपछि ह”त्या नै हो भनेर भन्न सकिँदैन।
जिल्ला प्रशासन र स्थानीयबीच दुई बुँदे सहमतिपश्चात् अ’व’रु’द्ध पूर्वपश्चिम राजमार्ग सु’चा’रुसँगै राप्ती नगरपालिका-३ बाट सुजिता भण्डारीको श”व काठमाण्डौ लगिएको थियो । पूर्वी चितवनको राप्ती-३ बाट अपहरणमा परेकी २३ वर्षीया सुजिता भण्डारी ह’त्या भएको भन्दै ह’त्यारा छिटो पत्ता लगाउन माग गर्दै स्थानीयले पूर्व पश्चिम राजमार्ग अ’वरुद्ध गरेका थिए । सुजिताले न्याय पाउनु पर्छ । घ’टनाको स’त्यतथ्य छा’नबिन होस’ भन्ने नाराबाजीसहित आ’क्रोशित बनेका स्थानीयहरुले सडक अवरुद्ध गरेका हुन् ।ईब्राईट नेपाल बाट